Ogaden News Agency (ONA) – Erdogan oo Ku Tilmaamay Jarmalka Cadawga 1aad ee Dalkiisa.
Erdogan oo Ku Tilmaamay Jarmalka Cadawga 1aad ee Dalkiisa.
Posted by ONA Admin	/ August 19, 2017
Ma aha markii ugu horaysay ee uu Erdogan hadalo adag u adeegsado wadanka Jarmalka iyo hogaamintiisa. Labadan dal ayaa leh xidhiidh dhaqaale oo ballaadhan, sidoo kale waxay ka wada tirsan yihiin gaashaanbuurta NATO. Muranka u dhexeeya labada dal ayaa sii xoogaystay wixii ka dambeeyay isku-daygii afgambi ee Turkiga ka dhacay 15-kii July 2016, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 240 qof.
Xukuumadda Ankara ayaa Jarmalka ku eedeysay in ay magangelyo siisay askar loo haysto in ay qayb ka ahaayeen isku-daygaasi. Waxaa arinta uga sii daray markii uu Jarmalka u diiday mas’uuliyiin ka tirsan xisbiga madaxweyne Erdogan in ay olole ka sameeyaan gudaha dalkaasi, ayagoo xilligaa jaaliyadda Turkiga ah taageero uga raadinayay aftidii dhacday bishii April.